MAQAAL: TALADII TIGREE NOO HORKACAY JAAZADEED HELAY MAANTA. – Radio Daljir
Oktoobar 22, 2018 9:23 b 1
Waxaa xusid mudan in taariikhda aduunku dhigayso,in dalkastoo waaya dawlad dhexe oo xoog leh oo dalka oo dhan sugta xuduudiisa ah bad iyo bari iyo cirba,in uu galaayo dayac ah in ibliiskastaa ka faa iidaysto shisheeye iyo sokeeyaba. waxaynu soomaray anoon dib uuga sii faaloonin,aan inyar bidhaansho shantii shaydaan ee mid toobadkeenay afarta falaago iyo xaalkooda.
Shayaadiinul insigaani waa kuwo ku yimid xaalada dawlad la aaneed ee asiibtay dalkeena.waxaa iyaga bud dhige u ahaa oo sameeyay qoqobaykay fadhiyaan,habaar qabihii waynaa ee galbaday waa TIGREE. waxa uu uugu tala galay in ay caqabad ku noqdaan in dalkeena ay ka dhalato dawlad soo celisa guud ahaan soomaaliya kala danbayntii iyo sharafkii iyo hanaankii dawladnimo ee aynu lahaan jiray.
Falaagadani malaha garasho durugsan,mana laha aqoon waxtar u leh umada soomaaliyeed,kuma shaqeeyaan kumana dhisna fikir iyo afkaar ay leeyihiin.waligood mid waliba qoqobka loo dhiibay ee lagu yiri madax weyne ayaad ka tahay,uma aysan qaban wax dan guud ah oo anfaca shacabka soomaaliyeed. Lama arag lama maqal lamana sheegin hal ceel,hal isguul,oo iyagu ka maamul ahaan ay qabteen!!! waxaa ka dhisan dagaanada ay joogaan oo leh isbitaal iyo iskoolo iyo hormar waa mid shacabku isagu qabsaday si iskiis ah.
Falaagadu waligood ma dhicin in ay iska kaashadeen ladagaalanka shabaab iyo argagixisada! lama arag iyagoo iska kaashanaya dhanka waxbarashada amaanka iyo ganaacsiga midna oo arinkaa u shiraya! waxaa waajib ku ah in ay adeecaan uuna hogaan samaan sida caalamka kalaba awaamiirta madaxweynaha dalka iyo dawlada dhexe, waxaa waajibku ah siyaasada dalka iyo arimaha dibada in ay uuga danbeeyaan dawlada dhexe. waxaan arkaynaa in taa badalkeeda ay ku dadaalayaan har iyo habeenba sidii loo fishalin lahaa,oo loo curyaamin lahaa in dalka soomaaliya helo dawlad dhexe oo hanata dalka oo dhan.
Falaagadu waxay dhinac marsan yihiin dhaqanka iyo siyaasada dadka iyo dawlada soomaaliyeed,waxayna dalkeenii ka dhigeen dawlado shisheeye ah oo is haya dhexdooda. waxay iska dhigayaan in ay mid yihiin iyagoo muujinaya in ay caalamka u tusaan in soomaaliya aysan jirin dawlad dhexe dalkuna yahay fawdo ninba gobol haysto.
Waxaa kadabkoodiiba go ay kolkii waa aduune Tigreegii ama aabahood Oromo ku habsatay.Aabahood Tigree wuxuu u sheegay in mid waliba gobolka uu haysto loo dooran doono 4 sanadood oo kale oo ay soo noqonayaan marwalba.shaqadooduna ay tahay in ay ku dadaalaan in dalkan dawlad ka dhalan shaqaysa. isma aysan lahayn waligoodba Adoogiin Tigree ayaa talada dalka ethiopia sahalkaa loo dhaafin!!.
Xaalada ay hada ku sugan yihiin falaagadu,waxaan soo xusuustay hees abwaan soomaaliyeed tiriyay oo weedh kamid ahi ahayd sidan wuxuu yiri ” Kolka doontu dageeyso ninka saaran dusheeda naxdin ways ladarsaa nee” waa runtii abwaanku xaaladaas waa mid culus naftuna waa macaantahay,sidaa dhigeedii ayaan arkaayoo afartan falaago waxay arkaan in aysan soo noqonayn dib danbe oo doonidii la dagtay,waxaase wax lala yaaba ah in hada uun ay is arkeen in ay taagan yihiin gari go an cidla ah! waxay hada uun dareemeen in doontii la dagtay, waxay ahayd in ay fahmaan dagida doontooda markii majaraha uu qabtay wiilka Oromo.
Waxay fahmi waayeen in dalkeena uu majaraha u qabtay wadani shacabka soomaaliyeed dal iyo dibadba taageersanyahay oo garabtaagan yahay. waxay fahmi waayeen in dawlada iyo shacabka soomaaliyeed dibdanbe diyaar uugu ahayn arimaha dalkayaga oo shisheeye soo fara galiyo sidii hore. waxay fahmi waayeen in shacabka iyo dawlada soomaaliyeed soo ceshadeen qayimkoodii dawladnimo oo cidna aanaan kayeelaynin faragalin shisheeye.
Waxay fahmi waayeen in dawlada soomaaliya tahay dawlad ay ka haybaysanayaan dawladaha caalamku oo la aamin sanyahay. waxay fahmi waayeen in sidii shalay aan dhaqaalaha dalkeena dayn iyo deeq midna loo soomarsiinin haydo fadhiya kenya oo shisheeye,taa badalkeedana si toos ah dawlada soomaaliyeed loogu soo shubo bangiyadeena iyo wasaaradeena maaliyada.
Waxaysan fahan sanayn in shacabka soomaaliyeed ogolayn dawlad la aan iyo fawdo danbe oo dalkeena lagu sameeyo. waxaan arkaa in waayuhu ku ciiray oo cidla ciirsila ay maanta kuud kuududaan iyagoo leh afarsano hanaloogu diiro oo aan siijoogno! waase nasiib daro hadii Gabre iyo Farmaajo kala garan waayeen!
Shacabka koonfur galbeed,shacabka jubaland,shacabka galmudug iyo shacabka puntland waa in ay doortaan madax wadaniyiin ah oo goboladoodana kashaqaysa dawladooda dhaxana si daacad ah ula shaqaysa,si dalkeenu u noqdo una ahaado dal leh dawlad xoogleh. dalkeena ma aqbalayno dana iinoomaba aha in aynu ahaano sidii tigree qorsheeyay dawlado yar yar oo gobolo ah oo nin waliba yahay dawlad gooni ah oo ka amar wayn dawlada dhexe. sidaasi maha dawladnimo wax la aqbali karana ma aha.
Markii Tigreegii lawaayay,ayaa dawlada E-maraatku galay halkii tigreega,waxa uu uqaybiyay baabuur dagaal dawlad goboleedyadii,waxa uu siiyaa lacag ah in lagu burburiyo dawlada dhexe ee soomaaliya.E-maraatku waxay dagaal ku hayaan Turkiga oo rabaan in ay kasaaran soomaaliya,waxay doonayaan in xeebaha soomaaliya ay qabsadaan maadaama 2021 dakadooda laga guurayo oo loo guurayo dakada cusub. waxay doonayaan in ay dakadaheena dilaalaan inagana inaga saaraan fursadaas ah in aan ka faa iidaysano ingu dakadaheena. hadaba si hadafkooda ay ugaaraan waa in ay meesha ka saaraan dawladan wadaniga ah ee soomaaliyeed.
Laakiin E-maraat waa quustay kadib markii ay isku diri waayeen madaxweynaha soomaaliya iyo raysal wasaara,waxayna sii quusteen markii raysalbaarlamaankii hadana noqday wadani dalkiisa difaacaya. dawlada soomaaliyeed waa mid madaxweynaha iyo raysal wasaaraha iyo afhayeenka baarlamanka sida dunida kale,kolkaa cadawgii soomaaliya waa jabay.
Shacabaka iyo dawlada soomaaliyeed waa isku hadaf dawladnimo ayaan rabanaa marabno kala qoqob iyo qabiil.waan guulaysanay intaa yaree shabaabka kasii hartay waa in aan tirtiraa. afartan falaago iyagu waa baxeen duruufahaa saaray hadal uma baahna iyo waqti in soomaaliya ay ku dhumiso,waase in rag wadaniyiin ah gobolada kasoobaxaan.Caku Tikree bal ragaan suu uluugooyay day! ishaa kamuuqata Tikree baa u yeelay,nimankii fadhi waa diideen kola kismaanyo ayay ku shiraan,kola baydhabo ayay ku shiraan,kola jawhar,kola dhuusomareeb,kola garoowe bal in ay helaan cid lahadasha! nafeey lagu waa.
Wararkii ugu dambeeyay iyo shirka Garoowe uga socda Madaxda maamul Goboleedyada
Gurtahaji 2 years ago
Hadal malagii galay iga dheh adiga qoraalka aad qortay xagee ku socdaa, wuxuuse u egyahay qoraaladii kacaanka 21okt dadka lagu marin habaabin jirey, sida hebel waa daba dhilif, iyo qaran dumis, itoobiyuu u shaqeeyaa si dadka soomaaliyeed looga mashquuliyo la xisaabtanka hogaamiyahooda marka ha isxiijine farmaajo u sheeg wixii dadku heshiiyeen haku maamulo, riyada talo la maroorsado dhamaatey midaas waa tan dhafoorkaa soomaali u yeeshay. salaama ka dheh wbtfq.